Somaliland laba qaybood aan u kala qaado aslan. Qaybi waa ruuxdda Somaliland; Waa in la helo dowladnimo dadku u siman yahay lana wadda manaafacaadsado. Tan waxaa xalkeedu yahay in qaybaha heshiiska laga run sheego lana fulliyo. Waa in awoodda la qaybiyo oo inta degtaa ay u simanto. Waa dhaqaalaha si siman loo qaybsado oo aan qollo gafane ku noqon inta kale. Qaybta kale, waa calaamadaha qaranimo oo aan iyagu ahayn waxyaabaha laysku hayo. Somaliland hadii magaceedda loo daayo iyo hadii “Qudhac” loo bixiyo midna waxba ku kordhin mayso waxna ka dhimi mayso manfac-wadaaga bulshadu ay doonayso ee sababta u ah wadda-hadalka khaatumo iyo Somaliland.
Hadii aanay saamayn ku lahayn dheef-wadaaga Somaliland, waxay saamayn taban ku yeelaynaysa ban-dhiga iyo fahamka bulshadda caalamka ee ku aadan Somaliland, ileen waa tii la garan la’aa oo haddana shaadh kale soo xidhatay haddane. Bal qiyaas, Somaliland in badan oo xataa joogta waddankaa inoogu dhaw ee Ethiopia ayaan garanayn waxay Somaliland tahay! Sababtu waa inaanay magacan maqlinba taariikhdiisa. Somaliland waxay dunidda uga qarsoontay waxaa yaraa oo shan cisho oo kaliya ahaa dowladnimadii ay ka heshay gumaystaha 26 June 1960. Isla 1 July 1960 waxay ka mid noqotay dowladdii Jamhuuriyadda Somalia. Dunidda waxaaba ku adag inay soo saaran shantaas cisho iyo taariikhda goonida ah ee Somaliland ay lahayd intaanay Somalia la midoobin. Sababtu waxay tahay in 31 sano oo Somaliland ay dowladimadda Somalia ka mid ahayd ay liqday 5 cisho oo xoriyad la haysta goonina la ahaa, marka laga eego fahamka bulshada caalamka. Arrintani saamaynta ay leedahay iyo siday dhib ugu hayso wasaaradda arrimaha dibadda waxaan afkiisa ka xaqiijiyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland Dr. Mohamed Abdullahi Omar mar aan ka qaadayay waraysi anigoo daraasad wadda 13 May 2013.
Somaliland waxay muda ku siman rubuc-qarni dadaal naf iyo maalba ah ku bixisay sidii ay Somaliland duniddu u baran lahayd iyadda iyo taariikhdeedaba. Si fudud oo aan macno ku jiraba la aqoon marka loo badalo taarikaddii ay Somaliland watay, bal qiyaas tacab khasaarka halkaa ku jira. Kaaga darane, waxa kale oo ay cadaynba u noqonaysaa sida aan jiritaanka qaranimaba aanu cago badan ugu taagnayn ee uu marba u qaadan karo taarikadda uu doono!
Somaliland magaca hadii aanu jirin sabab macno leh oo loo badalaa, waxaa jiri karta in uu abuuro nidaam dowladeed oo aan ahayn kii hore oo ah mid ay wadda samaysteen laba maamul oo simani, waa mid Khaatumo la yidhaa iyo mid Somaliland la yidhaa. Hadda gara’oo hadii mar kale khilaaf yimaado “Magaca cusub” ee la samaystay wuxuu noqonayaa maamul ay sameeyeen la maamul oo midoobay, heshiisna kala saxeexday. Haddii tani tahay waxa ku qarsoon magac badallistaas, waxay keeni doontaa Somaliland oo kala daadata.
Abdifatah Ahmed Ileeye